NamasteNEPALI.com: सुटिङ् स्थलबाटै नायिका संचिता लुुईंटेललाई प्रहरीले समात्यो, किन ?
सुटिङ् स्थलबाटै नायिका संचिता लुुईंटेललाई प्रहरीले समात्यो, किन ?
काठमाडौं, १३ जेठ । घरमा काम गरेर बसेको अवस्थामा एकाएक नायिक संचिता लुुईंटेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउका कारणबारे केही खुलाईएको छैन ।
उनलाई प्रहरीले घरबाटै हत्कडी लगाएर प्रहरीले लगे पनि कुनै जघन्य अपराध गरेका कारण भने प्रहरीले निण्न्त्रणमा लिएको हैन । उनी अभिनित चलचित्र ‘राधा’को एक दृश्यमा उनलाई प्रहरीले हत्कडी लगाएको हो ।
नायिका लुईटेलले आफुलाई प्रहरीले लगेको जानकारी गराए पनि चलचित्रमा आफ्नो भूमिका बारे केही खुलास भने गरेकि छैनन । के कारण प्रहरीले हत्कडी लगाएको हो भनेर थाहा पाउनका लागि भने सबै दर्शक हलसम्म लागु पर्ने छ ।
यहि चलचित्र मार्फत संचिता नायक जीवन लुुईंटेलको जोडीका रुपमा देखा पर्दै छिन् । ‘छोडी गए पाप लाग्ला’ पछि अर्को सफल चलचित्रमा अभिनय गर्न नपाएको बताउने संचिता ‘राधा’को कथालाई दर्शकले मन पराउनेमा ढुक्क छिन् ।
Labels: CELEBRATY, ENTERTAINMENT